Inkomba ye-Glycemic ye-Ushukela ne-Fructose > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Glycemic Sugar Index
Ukulimala ushukela womzimba, eminyakeni yamuva, akuyona imfihlo kunoma ubani. Lo mkhiqizo wokudla, yize unezimpawu eziphakeme zokudla okunempilo, unomthelela omubi kakhulu emzimbeni.
Kwabanesifo sikashukela, ukudla kuyindlela yokuphila.
Ukusetshenziswa kukashukela okheniwe lapho kulungiswa imenyu yeziguli ezinesifo sikashukela akwemukeleki.
Ukudla ngokweqile kwe-carbohydrate yomzimba kugcwele ukuthuthukiswa kwezifo ezifana:
i-mellitus engavikelekile ye-insulin,
ukukhuluphala nezinqubo ezihlobene ne-pathological,
Kulokhu, abantu abahlushwa yilezi zi-pathologies futhi bamane balandelela indlela yokuphila enempilo bazama ukungafaki ushukela ekudleni, bawususele nge-sweetener ewusizo. Kunezinambuzane eziningi emakethe yesimanje yokudla. Ngeshwa, akuyikho konke ukwethulwa okuphephile ngokuphelele emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, ezinye zazo zingadala ukulimala okukhulu hhayi esigulini kuphela, kodwa nasemzimbeni ophilile.
Ama-sweeteners angaba yimvelo futhi abe owobuciko. I-sweetener edume futhi isetshenziswe kakhulu yi-fructose. Kungokwesigaba sabasiki bemvelo. Ushukela wezithelo (igama lesibili le-fructose) yi-carbohydrate esheshayo, ethandwa kakhulu ekudleni kokudla. Iningi labodokotela litusa ukubuyisela ushukela nge-fructose. Lesi sincomo singenxa yokuthi inkomba ye-glycemic ye-fructose iphansi impela uma kuqhathaniswa noshukela ojwayelekile. Akuthinti i-glucose metabolism, ngakho-ke ayibangeli ukungalingani ekukhiqizweni kwe-insulin emzimbeni.
Ayini amakhompiyutha e-carbohydrate?
I-carbohydrate iyinkimbinkimbi ye-organic yama-molecule, okuyi-substrate eyinhloko yokudla kweseli.
Cishe zonke izinqubo ze-biochemical emzimbeni zenzeka ngenxa yamandla akhishwe kuma-carbohydrate.
I-carbohydrate ineziqunjana - i-saccharide.
Ngokusho kwesigaba, kukhona:
I-Monosaccharides. Ziqukethe kuphela isihlokwana esisodwa se-molecule.
Ukukhishwa. Qukethe ama-molecule amabili.
Ama-polysaccharides aqukethe izinhlayiya ezingaphezu kwe-10. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo luhlukaniswe ngama-polysaccharides anezibopho eziqinile nezibopho ezibuthakathaka. I-Fiber ingeyokuqala, futhi isitashi ingeyesibili.
Futhi, i-carbohydrate complements ine-organichemical ngezigaba.
Ukuhlukaniswa okulandelayo kuhlotshaniswa nesikhathi sokuhlukaniswa komkhiqizo egazini:
Lokhu kuhlukaniswa kuhlobene nezinga lokungena kwabo egazini, kanye nohlobo lwomphumela kumetabolism yeglucose yegazi. Ukuhlola umphumela wama-carbohydrate ku-glucose yegazi, kusetshenziswa inkomba ekhethekile - inkomba ye-glycemic.
Ama-Saccharides enxenye eyodwa anenkomba ephezulu ye-glycemic, okuholela ezingeni eliphezulu lomthelela ku-glucose metabolism. Ama-Saccharides wokugaya kancane anciphisa inkomba ye-glycemic ephakathi nephansi. Kubukeka sengathi yonke into ilula. Indlela yokuphuma kungukufakwa kokudla okuphezulu kwe-GI ekudleni.
Ubunzima buseku lokuthi cishe yonke imikhiqizo inokwakheka okuhlanganisiwe kwama-carbohydrate.
Okusho ukuthi, kumkhiqizo owodwa izinhlobo eziningana zezinto zokugaya ezisheshayo zingahlanganiswa, kodwa futhi nezithako zokugaya kancane.
Umsebenzi we-fructose njengesakhiwo sezinto eziphilayo
Ingxenye yokudla kwe-carbohydrate ekudleni komuntu yiyona enkulu kunazo zonke. Lokhu kungenxa yokuthi kungama-carbohydrate anenani eliphezulu kakhulu lokudla nezindlela ngokushesha futhi, okubaluleke, isikhathi eside ukuhlinzeka ngomzimba ngakho konke okudingekayo ukudala nokukhipha amandla.
Amanye ama-carbohydrate abandakanyeka ekwakhekeni kodonga lweseli, ngaleyo ndlela enza umsebenzi wokuhleleka.
Ngenxa yokusebenza kwawo kwepulasitiki, amakhompiyutha e-carbohydrate adlala indima ekwakhiweni kwezakhi zezicubu zomzimba. Ngenxa yezimpawu zabo eziphakeme ze-hypertonic, ama-carbohydrate asekela umfutho wegazi osmotic.
Ukuthola igazi, amakhompiyutha e-carbohydrate enza imisebenzi elandelayo emzimbeni:
Ngenxa yale misebenzi ye-carbohydrate, izindlela eziningi zokuphendula emzimbeni ziyenziwa. Okokuqala, umsebenzi wamandla uyenziwa.
Lapho kuqhubeka umjikelezo wamaKrebs, lapho ama-monosaccharides ebandakanyeka ngqo khona, ukwakheka kwengxenye “yamafutha” ezakhiweni zeseli - i-ATP iyenziwa.
Ngenxa ye-ATP, kungenzeka ukugcina impilo kunoma iyiphi into ephilayo. I-ATP ayiwona nje umfutho wezinhlaka ze-biochemical.
Izici ze-glycemic ze-fructose
Ushukela wezithelo ungoweqembu lama-saccharides emvelo elilodwa. I-Fructose iboniswa ukunambitheka okumnandi okumnandi, nokunambitheka okumnandi kwezithelo. Imunwa kalula ngumzimba womuntu. Ushukela wezithelo uyisakhi esiyinhloko sezithelo eziningi, uju, imifino ethile, i-legumes nezilimo zezimpande. I-Fructose inesakhiwo esine-biochemical esifana ne-glucose, kepha ngayinye inezici zayo.
I-calorie fructose ihambelana nekhalori sucrose. Amagremu ayi-100 aqukethe amakhalori angaba ngu-400. Naphezu kweqembu elingeshukela se-elementi eyodwa, ku-fructose, inkomba ye-glycemic iphansi kakhulu - cishe amaphesenti angamashumi amabili.
I-GI fructose - engama-20, yize ingeyoqembu lama-carbohydrate asheshayo.
Inkomba ye-glycemic kashukela odliwayo kanye ne-fructose, ngaphandle kokuqukethwe okufanayo kwekhalori nezakhiwo ezifanayo ze-organoleptic, zihluke ngokuphelele. Lokhu inzuzo enkulu yokudla kwesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, enye yezinto eziphambili ze-fructose ukuthathwa kancane komzimba. Ukudonswa kwe-fructose esegazini akucasuli ukukhishwa kwe-insulin nokukhula kweglucose. Ngakho-ke, umzimba uthola ukwaneliseka okungenamsoco ngaphandle kokulimala kumanyikwe. Ukucutshungulwa kwe-fructose nokuqedwa kwayo kwenziwa amaseli wesibindi. Kukhishwa emzimbeni kusuka nge-bile. Futhi, ukuthathwa kwe-fructose akukuvuseleli isifiso sokudla, esingabophisi abathengi ukusetshenziswa kwaso njalo.
Ukukhetha phakathi kokudla ushukela ojwayelekile we-granured ne-fructose kunzima kakhulu. Ushukela yinto okuthiwa i-sucrose. Kungumkhiqizo omnandi wemvelo odonswa ngokushesha emzimbeni. Ushukela uthola izinguquko ezikhethekile ngemuva kokungena egazini. Ekugcineni, ngokuguqulwa okuyinkimbinkimbi, kuvela ama-glucose nama-molecule we-fructose. I-glucose inethonya elikhulu ekwakhekeni nasekuvikelweni kwe-insulin. Kulesi sixhumano, kufakwa umthetho wokuthi abantu abantula i-insulin badle ushukela nganoma yiluphi uhlobo.
Kepha-ke, ushukela uyisakhi esibalulekile sokudla kwamaseli womzimba. Kuyi-glucose oyisithako esiyinhloko samangqamuzana obuchopho.
Imiyalo yokusebenzisa i-fructose
Ukudla ushukela kulandela imiyalo, ukubuyekezwa kwabathengi nochwepheshe bezokwelapha.
Ngesifo sikashukela, ukungena kwe-fructose kufanele kukhawulelwe ku-30 ​​amagremu ngosuku.
Mayelana nendlela ye-hepatic yokuqedwa kwemikhiqizo ye-glucose metabolism, umphumela othile onobuthi esithobeni kungenzeka. Abantu abanomsebenzi wesibindi oncishisiwe kufanele banciphise noma bahlukanise ukusetshenziswa kwalesi sithelo esithandekayo. Ngokuphikisana nesizinda sokusetshenziswa ngokweqile kwe-fructose, kungahle kube nokukhula:
I-hyperuricemia - ukwanda kokuhlungwa kwe-uric acid egazini, okungakhula ngokuthuthukiswa kokusha kwe-gout,
ukusabela komzimba, ngoba umkhiqizo akuyona i-hypoallergenic.
Izinkinga ezinjalo zivela kuphela ngemuva kokusetshenziswa ngokweqile kwe-fructose ekhishwe, ngenkathi ukudla ukudla okunezinkinga zemvelo ze-Saccharide kuncishiswa kube yi-zero.
Kulabo abafuna ukulawula isisindo sabo, ama-pancreas kanye ne-glycemia, kuye kwenziwa amatafula akhethekile aguquliwe lapho ungalandelela okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo, inkomba ye-glycemic kanye nesilinganiso sezinto zokudla.
Amanye ama-sweeteners wemvelo afaka i-stevia, i-erythriol, i-sorbitol, i-xylitol nabanye. Ukwethulwa komuntu ngamunye wabo ekudleni kufanele kusondele ngokuqapha ngokweqile.
Ochwepheshe bazokhuluma nge-fructose kuvidiyo ekulesi sihloko.
Izinkomba ze-GI Ushukela
Phuzisa uju embizeni
Inkomba Yeshukela ye-Glycemic:
ushukela omhlophe ocolisisiwe - amayunithi angama-70,
ushukela onsundu - amayunithi angama-55.
Umkhiqizo wokudla onjengoju awunakuba nezinkomba ezingaphansi kwe-GI. Kodwa-ke, ngokuya ngohlobo lwezinyosi, i-GI ingahluka:
uju lwe-acacia - amayunithi angama-32.
uju lwezinyosi - amayunithi angama-49.
ujuwheat uju - izinkomba zalo zingafinyelela kumayunithi angama-80.
Izinga lenkomba ye-glycemic lincike enanini leshukela kanye nokuqukethwe kwefayibha koshokho wemvelo. Izinkomba zingasusela kumayunithi angama-25 kuye kwangama-70:
ushokoledi obisini - amayunithi angama-70,
ushokoledi omhlophe - amayunithi angama-65
ushokoledi omnyama - amayunithi angama-25.
Njengomthetho, ushukela awudliwe ngokuhlukile, usetshenziselwa ukukhiqiza iziphuzo noma ekuphekeni lapho ulungisa izitsha.
Umphumela we-GI empilweni yabantu
Ngemuva kokudla ukudla okune-GI ephezulu (amayunithi angaphezu kwama-50), umuntu uphinda abe nomuzwa wokulamba. Ushukela ophakeme ubangela i-insulin ukuyicubungula ngenkuthalo, iphenduka idiphozithi enamafutha.
Ukudla okuqukethe ama-carbohydrate ahlukaniswe ngamaqembu amathathu:
nge-GI ephezulu - amayunithi angaphezu kwama-70,
nge-GI emaphakathi - amayunithi angama-40-70,
i-GI ephansi - amayunithi ayi-10- 40.
Izinga lomthelela kwizinkomba ze-GI lincike ku-:
inani ushukela ekudleni
indlela yokwelapha yokushisa
imvelo nesikhathi sokugcina,
inani lamaprotheni namafutha.
Imikhiqizo equkethe inkomba ye-glycemic ephezulu kakhulu:
ushukela, uju, i-fructose,
irayisi, imifino enesitashi nezithelo (amazambane, omisiwe, ubhanana).
Labo abakhuluphele ngokweqile kufanele badle ukudla okuphansi kwe-GI, ngokwesibonelo:
inyama nenhlanzi - amayunithi ayi-10.,
imifino nezithelo (cishe konke ngaphandle kwamagilebhisi, ama-Persimmons, ubhanana) ngendlela eluhlaza.
Eqinisweni, ukudla okune-GI ephezulu akunangozi njengoba kunokukholelwa kakhulu. Eqinisweni, okuyingozi kakhulu kubhekwa njengokusetshenziswa kakhulu kwemikhiqizo enjalo. Uma umuntu enza umsebenzi onzima, noma evakashela ejimini njalo, khona-ke i-GI ephezulu emikhiqizweni ngeke ibe nomthelela ongemuhle kwesisindo nasempilweni. Ukuze wakhe kahle ukudla kwakho, udinga ukukhetha isethi efanele yemikhiqizo enenkomba ye-glycemic ephakathi naphakathi. Ukudla okwenziwe kahle kuyisiqinisekiso sempilo engcono ngesikhathi sokunciphisa umzimba kanye nakubantu abanesifo sikashukela.
Wonke ama-carbohydrate anezinhlayiya ezingafani - ama-saccharides. Uma kufakwa i-saccharide eyodwa, khona-ke into enjalo ibizwa ngokuthi yi-monosaccharide, lapho kukhona amayunithi amabili - i-disaccharide. I-carbohydrate enama-saccharides afinyelela kwayi-10 ibizwa nge-oligosaccharide, engaphezu kwe-10 - i-polysaccharide. Lesi yisisekelo sokuhlukaniswa okuyisisekelo kwezinto eziphilayo.
Kukhona futhi ukwahlukaniswa kwezakhamzimba ezisheshayo nezihamba kancane, kuye ngezinga le-glycemic index (GI) kanye nekhono lokukhulisa inani likashukela egazini. Ama-monosaccharides anama-index aphezulu, okusho ukuthi asheshe andise inani le-glucose - lawa ama-carbohydrate asheshayo. Izithako ezihamba kancane zine-GI ephansi futhi zikhuphula kancane ushukela. Lokhu kufaka wonke amanye amaqembu ama-carbohydrate, ngaphandle kwama-monosaccharides.
Imisebenzi ye-Organic Compounds
Ama-carbohydrate enza imisebenzi ethile, ngokuba yingxenye yamaseli nezicubu zezinto eziphilayo:
ukuvikelwa - ezinye izitshalo zinamadivaysi avikelekile, okuwumbhalo oyinhloko wawo kungama-carbohydrate,
ukwakheka - amakhompiyutha aba yingxenye eyinhloko yezindonga zeseli isikhunta, izitshalo,
ipulasitiki - iyingxenye yama-molecule anesakhiwo esiyinkimbinkimbi futhi abamba iqhaza ekwakhekeni kwamandla, i-molecule compounds eqinisekisa ukulondolozwa kanye nokudluliswa kwemininingwane yofuzo,
Amandla - "ukucubungula" kwe-carbohydrate kuholela ekwakhekeni kwamandla namanzi,
isitoko - ukubamba iqhaza ekuqongeleleni izakhamzimba ezidingwa umzimba,
i-osmosis - ukulawulwa komfutho wegazi osmotic,
umuzwa - bayingxenye yenani elikhulu lama-receptors, basiza ukwenza umsebenzi wabo.
I-Fructose yi-monosaccharide yemvelo. Lokhu yinto emnandi etholwa kalula ngumzimba womuntu. I-Fructose itholakala kwizithelo eziningi, uju, imifino nezithelo ezinoshukela. Inokwakheka okufanayo kwamangqamuzana ne-glucose (futhi yi-monosaccharide), kepha ukwakheka kwawo kuhlukile.
UFructose unokuqukethwe kwekhalori okulandelayo: 50 g womkhiqizo uqukethe ama-kcal angama-200, ophakeme kakhulu kune-sucrose yokwenziwa, esikhundleni salokho ushukela ojwayelekile osetshenziswa empilweni yansuku zonke (193 kcal has 50 g of). Inkomba ye-glycemic ye-fructose ingama-20, yize ingeyoqembu lama-carbohydrate asheshayo.
I-Monosaccharide ine-palatability ephezulu. Ubumnandi baso budlula ushukela noshukela izikhathi eziningana.
I-Fructose noma ushukela - yikuphi okungcono?
Ayikho impendulo eyodwa kulo mbuzo. I-glucose nayo ingushukela ongafinyeleleki odingekile we-metabolism ejwayelekile kanye nomsebenzi obalulekile wamaseli nezicubu. I-Sucrose ingumkhiqizo owenziwe wedwa oqukethe i-glucose ne-fructose. I-Cleavage to-monosaccharides itholakala emgungwini wesisu womuntu.
Kukholelwa ukuthi ngokusetshenziswa kwe-sucrose, amathuba okuthola izifo zamazinyo anda kaningana. I-Fructose inciphisa ubungozi benqubo ye-pathological, kepha iyakwazi ukwakha izakhi nezinto zensimbi, eziphazamisa ukungena kwayo. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwengxenye ye-fructose emsulwa ekhishwa ihamba ohlelweni lokujikeleza ngesimo sohlobo oluthile lwamafutha, okucasulayo ukuthuthukiswa kwezifo zenhliziyo.
Inkomba ephansi ye-glycemic ye-fructose ayisho ukuthi ingasetjenziswa endzaweni enoshukela, noma noma ngamanani amakhulu. Uma isiguli sisetshenziselwa ukubeka izipuni ezimbili kashukela etiyeni bese sithatha isinqumo sokusibuyisela ngenani elifanayo le-monosaccharide, umzimba wakhe uzothola ama-carbohydrate angaphezulu.
Ama-diabetesics ohlobo oluzimele lwe-insulin kufanele anciphise inani lezinto ezisetshenzisiwe ku-30 ​​g ngosuku, okungabhekwa hhayi kuphela ngesikhathi sokupheka, kodwa futhi nenani elisetshenziswa njengoshukela kulo lonke usuku.
Isifo sikashukela esincike ku-insulin sikuvumela ukuthi usebenzise inani elikhudlwana, kodwa futhi nangomkhawulo ofanele (mayelana ne-50 g kumuntu omdala). Uma uhumushela ezinkombeni, uthola itiye elingama-5-6 noma izipuni ezi-2. Lokhu kusebenza ku-fructose eyenziwe. Uma sikhuluma nge-monosaccharide yemvelo, equkethe izithelo nezithelo, khona-ke isilinganiso saso sihluke ngokuphelele. Inani elivumelekile lansuku zonke liqukethe:
Izibuko ezi-2 zama-sitrobheli.
Indlela ye-"hepatic" yokungena kwe-monosaccharide emzimbeni inyusa umthwalo ngqo esithweni nakuhlelo lonke. Umphumela ungaba ukwehla kwekhono lamaseli okuphendula i-insulin.
Izinkinga ezingaba khona yilezi:
I-Hyperuricemia ukwanda kwenani le-uric acid esegazini, okungadala ukukhula kwe-gout.
I-Hypertension nezinye izifo ezihambisana nokwanda komfutho wegazi.
Isifo esinamafutha esibindi esingewona utshwala.
Ukukhuluphala nokungabi namandla kokuphikisana nesizinda sokukhula kokumelana kwamangqamuzana omzimba ku-hormone elawula ukungena kwe-lipids.
Ukuntuleka kokulawula ukushuba - umkhawulo phakathi kwendlala nokugcwala uguqula imingcele.
Izifo zesistimu yenhliziyo ebangelwa yikholesterol eyeqile namafutha asemgodini wegazi.
Ukuvela kwesimo esizimele sikashukela kumuntu onempilo ngenxa yokwehla kokuzwela kwamaseli kuya kuma-pancreatic hormone.
Izibonelo zokusetshenziswa kwento
I-monosaccharide emnandi isetshenziswa ezindaweni eziningana:
Ukupheka - njengama-sweeteners wokwenza ama-confectionery namajusi.
Ezemidlalo - ukuvuselelwa okusheshayo komzimba ngezikhathi zokuzikhandla ngokweqile komzimba nokuqeqeshwa kanzima.
Umuthi - ukuqeda izimpawu zokuthi ubuthi be-ethyl utshwala. Ukuphathwa kwe-Intravenous kwenyusa izinga lokuqedwa kotshwala, kunciphisa ubungozi bemiphumela emibi engenzeka.
Ukulungiselela inhlama oyidingayo:
ingilazi ye-cottage shizi
1 tbsp i-fructose
0.5 tsp usawoti wokucishwa uviniga
ingilazi ye-buckwheat noma ufulawa webhali.
Govuza ushizi wekhishi, iqanda elishayiwe, i-fructose nosawoti. Faka i-slaked soda bese uxuba konke. Thela ufulawa ezingxenyeni ezincane. Ama-bun bun angaba yiluphi uhlobo nosayizi.
½ inkomishi oatmeal
½ inkomishi ye-oatmeal noma ufulawa we-buckwheat,
1 tbsp imajarini
1 tbsp i-fructose.
I-Flour ihlanganiswe ne-oatmeal ne-margarine ethambile. Kancane kancane uthele amanzi bese uxova inhlama yokuvumelana okufanayo. I-Fructose, i-vanillin iyangezwa futhi ixubeke futhi. Bhaka ekhasini lokubhaka ngesimo samakhekhe amancanyana kuze kube nsundu yegolide. Hlobisa ushokoledi omnyama ku-fructose, amantongomane noma izithelo ezomisiwe.
I-Fructose imnandi kakhulu, kepha ukuphepha kwayo kubonakala kudukisa futhi kudinga ukusetshenziswa ngokucophelela, ikakhulukazi kubantu 'abanesifo esimnandi'.
Ingabe i-fructose ivunyelwe ushukela? Izinzuzo, ukulimaza kanye nokusetshenziswa
I-Fructose ingumkhiqizo ojwayelekile otholakala emashalofini awo wonke ama-shop.
Ibeka endaweni efanele ushukela ojwayelekile, osiza kakhulu emzimbeni. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu kubantu ababukele lesi sibalo, kanye nalabo abanesifo sikashukela.
UFructose wafika etafuleni lezakhamizi ezijwayelekile ngemuva kwezifundo eziningi zaselebhu.
Ukubonakalisile ukulimala okungenakuphikwa kwe-sucrose, okubangela ama-caries futhi kungakwazi ukucutshungulwa ngumzimba ngaphandle kokukhishwa kwe-insulin, ososayensi beze nento emangalisayo yemvelo, ukumuncwa kwayo ngezicubu zomzimba kungumyalo wokukhulu ngokushesha futhi kube lula.
Ushukela wezithelo zemvelo
Imizamo yokuqala yokuhlukanisa i-fructose kusuka kuthini lobumba kanye ne-dahlia nezilimo eziyizigaxa yehlulekile Izindleko zomphunga opholile zaziphezulu kakhulu kangangokuba umuntu ocebile kuphela owayenemali yokuthenga.
I-fructose yesimanje itholakala ushukela yi-hydrolysis, enciphisa kakhulu izindleko futhi yenze lula inqubo yokukhiqiza umkhiqizo omnandi kumanani wezezimboni, okwenza ifinyeleleke kubantu abajwayelekile.
Ukudla i-fructose kusiza abantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2.
Ngenxa yokuvela kwaleli swidi, ukudla okumnandi kwatholakala kwiziguli, okwakudingeka zibeke isiphambano ngesibindi kuzo ngaphambili.
I-Fructose imnandi kakhulu kunoshukela ojwayelekile, ngakho-ke ungayisebenzisa ngesigamu, ngaleyo ndlela unciphise ukuphuza ikhalori futhi ugweme ukukhuluphala. Ngasikhathi sinye, ukunambitheka kokudla noma isiphuzo akuphulwa.
I-Fructose iyi-monosaccharide enayo, ngokungafani ne-sucrose ne-glucose, isakhiwo esilula. Ngakho-ke, ukuze kufundwe ngale ndlela, umzimba akudingeki wenze imizamo eyengeziwe futhi ukhiqize i-insulin edingekayo ukuze wephule i-polysaccharide eyinkimbinkimbi ibe izingxenye ezilula (njengasoshukela).
Ngenxa yalokhu, umzimba uzosuthiswa futhi uthole inani lamandla elidingakalayo, ukugwema ukwanda kwezinga le-glucose egazini. I-Fructose isusa ngokushesha umuzwa wokulamba futhi inesandla ekuvuseleleni amandla ngokushesha ngemuva kokuxineka ngokomzimba noma ngokwengqondo.ads-mob-1
Lapho likhulu inani, umkhiqizo usucutshungulwa ngokushesha, i-glucose ingena egazini futhi igcwala umzimba. Futhi okuphambene nalokho: i-GI ephansi ikhombisa ukukhipha kancane kancane ushukela egazini kanye nokwenyuka kancane kwenqanaba likashukela noma ukungabikho kwalo.
Ngalesi sizathu, inkomba ye-index ye-hypoglycemic ibaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela, izinga likashukela liyinkomba ebalulekile kulo. I-Fructose yi-carbohydrate ene-GI yayo incane (ilingana no-20).
Ngokufanelekile, imikhiqizo equkethe le monosaccharide cishe ayikhuphi ushukela wegazi, isiza ukugcina isiguli sizinzile. Ethebhuleni le-indices ye-hypoglycemic, i-fructose ikholomu we-"carbohydrate" "omuhle.
Esikhathini sikashukela, i-fructose iphenduka umkhiqizo wansuku zonke. Futhi njengoba lesi sifo sibonakala ngokushintshwa okubukhali kwezimo ngemuva kokudla okungalawulwa, ukusetshenziswa kwale khemikhali kufanele kusondelwe ngokucophelela kunasesimweni sokudla okujwayelekile.
Ngaphandle kwezinzuzo zayo ezisobala, i-fructose, njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo, nayo inezici ezithile ezingezinhle okufanele zinakwe ngokukhethekile kulabo abahlushwa izigaba ezahlukahlukene zesifo sikashukela:
ukumuncwa kwe-monosaccharide kwenzeka esibindini, lapho i-carbohydrate iguqulwa ibe ngamafutha. Eminye imizimba ayiyidingi. Ngakho-ke, ukusetshenziswa okungafanele kwemikhiqizo ye-fructose kungadala ukuqina kwesisindo futhi ukukhuluphala,
ukunciphisa i-GI akusho neze ukuthi umkhiqizo unokuqukethwe okuphansi kwekhalori. I-Fructose ayiphansi ukuthi i-sucrose kumakhalori - 380 kcal / 100 g. Ngakho-ke, umkhiqizo akufanele udliwe ngokucophelela ngaphandle kwe-sucrose. Ukuhlukumeza i-sweetener kungadala ukugxila kushukela wegazi, okuzoqinisa isimo sesiguli kuphela,
ukusetshenziswa okungalawulwa kwe-monosaccharide kwephula inqubo efanelekile yokukhiqizwa kwama-hormone, ebhekele ukulawulwa kokudla (leptin). Ngenxa yalokho, kancane kancane ubuchopho buyekela amandla okuhlola amasignali we-satellation ngesikhathi, okuholela ekuzweni okungapheli kwendlala.
Ngenxa yezimo ezibalwe ngenhla, kuyadingeka ukusebenzisa umkhiqizo owenziwe ngaphandle kokuphula izinkambiso ezibekwe odokotela.ads-mob-2
Ukusetshenziswa kwe-fructose kushukela ngeke kulimaze umzimba uma isiguli silandela le mithetho elula elandelayo:
ngokuya ngokusetshenziswa kwe-sweetener ku-powder, bheka isilinganiso sansuku zonke esinqunywe udokotela,
cabanga yonke eminye imikhiqizo equkethe i-monosaccharide (izithelo, i-confectionery, njll.) ngokwahlukana ne-sweetener eyimpuphu (sikhuluma ngokubala amayunithi wesinkwa).
Kubalulekile futhi ukuthi ubheke uhlobo lwesifo isiguli esiba nalo. Lapho lesi sifo sishuba kakhulu, isibalo siba nzima.
Ngohlobo 1 sikashukela, ukusetshenziswa kwe-sweetener kuvunyelwe ngaphandle kwemikhawulo eqinile. Into esemqoka ukuqhathanisa inani lamayunithi esinkwa aqediwe kanye nomthamo olungiselelwe we-insulin. Ingxenye isiguli ezozizwa yenelisekile ngayo izosiza ekuboneni udokotela oholayo.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sinemikhawulo enzima. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, kunconywa ukuthi ukudla okuqukethe i-fructose ephansi kufakwe ekudleni. Lokhu kufaka phakathi izithelo nemifino engafakiwe.
Imikhiqizo eyengeziwe equkethe i-sweetener, kanye ne-monosaccharide ku-powder, kunconywa ukuthi ingafakwa ngaphandle.
Ukusetshenziswa okungajwayelekile kwemikhiqizo eyengeziwe kuvunyelwe ngemvume kadokotela ohambelayo. Le ndlela izosiza ekudleni ngokwenza amazinga kashukela egazi aqine futhi alawulwe.
Ngaphansi kwesinxephezelo sikashukela, umthamo ovunyelwe nsuku zonke ngu-30 g. Kulesi simo kuphela kudinga ukubhekwa njalo kwe-glycemia. Umthamo onjalo kufanele ungene emzimbeni kanye nemifino nezithelo, hhayi ngendlela ehlanzekile. Umthamo onembe kakhudlwana ecaleni ngalinye ngalinye unqunywa yi-endocrinologist.ads-mob-1
Ngaphezu kokubheka umthamo obekwe udokotela ukuze kugcinwe isimo esanele sempilo, isiguli sikashukela siyanconywa futhi ukuba silandele le mithetho elandelayo:
zama ukungathathi i-fructose yokwenziwa ngefomu yayo emsulwa, uyisuse esikhundleni se-analog yemvelaphi (izithelo nemifino engaphendulwanga),
khawula ukusetshenziswa kwamaswidi, aqukethe inani elikhulu le-fructose, ushukela, ushukela noma isiraphu yommbila,
yenqaba ama-sodas kanye nama-juices wesitolo. Lokhu kugxila okuqukethe inani elikhulu loshukela.
Lezi zinyathelo zizosiza ukwenza lula ukudla, kanye nokukhipha ukwanda okusheshayo koshukela wegazi onesifo sikashukela.
Mayelana nezinzuzo nokulimala kwe-fructose ngohlobo 2 sikashukela:
Esikhathini sikashukela, i-fructose ingenza umsebenzi omuhle njengommeli kashukela. Kepha lokhu kudinga isiphetho se-endocrinologist kanye nokungabikho ngokuphelele kokuphulwa kokusetshenziswa komkhiqizo. Kulesi sifo sikashukela, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukusetshenziswa kohlobo ngalunye lwe-carbohydrate kumele kulawulwe ngokuqinile yizinga le-glucose egazini lesiguli.
Ukukhetha phakathi kokudla ushukela ojwayelekile we-granured ne-fructose kunzima kakhulu. Ushukela yinto okuthiwa i-sucrose. Kungumkhiqizo omnandi wemvelo odonswa ngokushesha emzimbeni. Ushukela uthola izinguquko ezikhethekile ngemuva kokungena egazini. Ekugcineni, ngokuguqulwa okuyinkimbinkimbi, kuvela ama-glucose nama-molecule we-fructose. I-glucose inethonya elikhulu ekwakhekeni nasekuvikelweni kwe-insulin.Kulesi sixhumano, kufakwa umthetho wokuthi abantu abantula i-insulin badle ushukela nganoma yiluphi uhlobo.
Ama-carbohydrate - ahlinzeka ngengqondo yethu, izicubu nezitho zomzimba ngamandla. Naphezu kweqiniso lokuthi ama-carbohydrate ayisisekelo sokudla kwethu, iningi lethu lidlula lokhu okujwayelekile. Ama-carbohydrate amaningi ngokweqile avame ukuholela kwesisindo ngokweqile kunamafutha amaningi ekudleni.
Abantu besaba ama-carbohydrate, ngakho-ke ukudla okuthola ukuthandwa, okubiza ukunciphisa kakhulu i-carbohydrate futhi kunganciphisa nokusetshenziswa kwezithelo ezintsha. Ngasikhathi sinye, okunye ukudla okunjalo kuphakamisa ukunganciphisi umthamo wamaprotheni namafutha.
Ukwahlukaniswa kokuhle nokubi kutholakala ngokwemvelo yomuntu. Ngakho-ke, ukudla amademoni okukhohlisa, abaholi bake babheka ukuthi ukumisa lolu bhubhane lokukhuluphala kufanele kube ukwehliswa kokudla kwamafutha. Kodwa-ke, ukuze kwanelise ukudla ngaphandle kwamafutha, kufakwe ushukela kubo. Uyakhumbula ukuthi lokhu kumane kwandise inkinga. Ake sibheke ukuthi kungani.
Isigaba "sama-carbohydrate" sifaka imikhiqizo ehlukahlukene yokudla, eminye yayo ibaluleke kakhulu empilweni yethu, futhi singabushaya indiva abanye.
Isibonelo, ilayisi ne-oatmeal kungumthombo wamandla womzimba wethu, okuthi, ngenxa yobukhona befayibha elayisi nase-oatmeal, kukhishwe kancane kancane. Ngakho-ke i-fiber yehlisa ijubane ukuphuma kwe-glucose egazini.
Izinga lapho ushukela lithola ekudleni kuya egazini ngesikhathi sokugaya inqunywa yinkomba ye-glycemic. Ama-cereals, afana nelayisi noma i-buckwheat, azokhipha ushukela kancane, futhi inkomba ye-glycemic (GI) izophansi. Isinkwa esimhlophe noma ishukela elimnandi lizogcwala masinyane igazi nge-glucose, okusho ukuthi i-GI iphezulu.
Umzimba uphendula ngokubakhona kwe-glucose egazini ngokukhishwa kwe-insulin. Le hormone isebenzisa ushukela, ngaleyo ndlela yehlise izinga layo egazini. Kusho ukuthini ukusebenzisa? Ingxenye ye-glucose ihanjiswa yi-insulin iye emangqamuzaneni amalungu angaphakathi, ingxenye ethile izothunyelwa esibindini nasemisipha “esitokisini”. Futhi okungahambisani nesibindi nemisipha, i-insulin “izodlulela” emangqamuzaneni amafutha, azowguqula abe ngamafutha agcwele futhi aqongeleleke njengezicubu ze-adipose.
Ngakho-ke, lapho ikhuphuka inkomba ye-glycemic, i-glucose ethe xaxa ingena egazini, okusho ukuthi lapho likhulu i-glucose eyeqile i-insulin idlulela emangqamuzaneni amafutha, bese iliguqula libe izicubu ze-adipose. Kepha lokho akupheleli: ngenxa yokuntuleka kwefayibha, uzozizwa ulambile maduze, futhi lokhu kuzoholela ekudambeni kakhulu.
Inkomba yokudla ye-glycemic iphansi uma iqukethe i-fiber, noma lapho uyidla ngokudla kwamaprotheni noma ukudla okuqukethe amafutha. Kulabo ababheka isisindo noma ushukela wegazi, ukudla ukudla okunenkomba ye-glycemic ephansi kubaluleke kakhulu. Empeleni, lokhu kubalulekile kithi sonke.
Ama-carbohydrate afaka uhla olubanzi kakhulu lokudla. Ezinye zingasilimaza ngokuhamba kwesikhathi, kanti ezinye zizosizakala futhi zilondoloze impilo yethu. Ukufunda ukukhetha imikhiqizo efanele esigabeni ngasinye sama-macronutrients kuyisihluthulelo sempilo ende.
Wonke ama-carbohydrate akhiwa "amayunithi" ahlukile - ama-saccharides. Ama-carbohydrate aqukethe iyunithi eyodwa abizwa ngokuthi ama-monosaccharides, amayunithi amabili angama-disaccharides, amayunithi amabili kuya kwayishumi angama-oligosaccharides, kanti angaphezu kweshumi angama-polysaccharides.
Ama-carbohydrate alula aqukethe ama-monosaccharides (ushukela kanye ne-fructose) noma ama-disaccharides (ushukela wethebula), akhulisa ushukela wegazi ngokushesha, ngakho-ke abizwa nangokuthi ama-carbohydrate asheshayo.
Sihlangana noshukela wethebula nsuku zonke, kepha ushukela emacaleni aphuthumayo lapho sinqunyelwa i-dropper (ngokwesibonelo, enobuthi obukhulu noma ngokulahlekelwa kwegazi). UGlyko (glyko) - ubumnandi ngesiGreek. Ngakho-ke, ushukela egazini ubizwa nangokuthi ushukela wegazi. Kodwa-ke, igama elinjalo alinembile.
Inkomba ye-glycemic iyinkomba yemiphumela yama-carbohydrate ekudleni ekushintsheni kwezinga le-glucose egazini. Lokhu kusho ukuthi kwi-GI ushukela othathwe njenge-100.
I-molecule yeshukela iqukethe ama-monosaccharides amabili: i-fructose ne-glucose. Inkomba ye-glycemic ye-fructose ingu-20, kanti ushukela ungu-100. Ngakho-ke, ushukela unenkomba ye-glycemic engaphansi kwekhulu.
Inkomba ye-glycemic (GI) impendulo yomzimba engxenyeni yokudla okudliwayo, okuzibonakalisa ngokwanda koshukela ngenani elithile lamayunithi.
IGlucose yamukelwa njengesethenjwa, inkomba yayo ilingana no-100. Yonke imikhiqizo ihlukaniswe ngezigaba ezintathu: GI ephansi, ephakathi nephezulu.
Isisekelo sokudla kweziguli ezinesifo sikashukela kufanele kube yimikhiqizo evela esigabeni sokuqala. Kusukela kwesibili - ngezikhathi ezithile zingafakwa ekudleni. Inkomba ephezulu ye-glycemic iyanconywa kwabanesifo sikashukela. Ukuze kube lula, zonke izinkomba zifingqiwe kuthebula linye.
Ama-carbohydrate ahlukaniswe izigaba ezintathu: elula, eyinkimbinkimbi, enemicu. Ushukela yi-carbohydrate elula. Ingeniswa kalula emzimbeni, ikhulisa ngokushesha ukugcwala kweglucose egazini. Kutholakala ngobuningi kumaswidi, iziphuzo ezinekhabhoni, noshokoledi.
Ngemuva kokungena, i-sucrose iphulwe yaba ushukela kanye ne-fructose. I-glucose inomphumela onamandla ekukhiqizweni kwe-insulin, ngakho-ke ukudla okunothukela okuningi kufanele kungafakwa kuhlobo lwesifo sikashukela.
Izincwadi ezivela kubafundi bethu
Ugogo ugule isikhathi eside (uhlobo 2), kepha muva nje izinkinga ziye zangena emilenzeni nasezitho zangaphakathi.
Ngathola ngengozi i-Internet engisindise impilo yami. Kwakunzima kimi ukubona ukuhlupheka, nephunga elibi kulelo gumbi lalingihlanyisa.
Ngalesi sikhathi sokwelashwa, ugogo wamshintsha ngisho nemizwa yakhe. Uthe imilenze yakhe ayisasebenzi futhi izilonda aziqhubeki; ngesonto elizayo sizoya ehhovisi lodokotela. Sakaza isixhumanisi esihlokweni
I-Fructose yi-monosaccharide ethi, ngokungafani noshukela kanye ne-sucrose, enesakhiwo esilula. Ngakho-ke, ngokwenziwa kwayo, umzimba udinga ukwenza umzamo omncane futhi uthuthukise i-insulin encane. Lokhu kubalulekile kakhulu kwabanesifo sikashukela, ngoba ukugcwala kwenzeka ngaphandle kokuxhuma kweglucose egazini.
I-Fructose inomphumela onenzuzo emzimbeni: inika ukwaneliseka okuhlala isikhathi eside, futhi ngesikhathi esifushane ibuyisa umzimba ngemuva kwemithwalo esindayo.
Kutholakala kumajikijolo, izithelo, izithelo ezimnandi, uju futhi kunephunga elikhanya ukwedlula amanye ama-sweeteners.
I-GI noshukela, noju kucishe kufane. Noma eyokugcina, ingahluka ngokuya ngohlobo lwayo. Kukholelwa ukuthi ushukela une-index yezindikimba ezingama-70, inani elifanayo labelwa uju.
Ushukela, noma kunalokho umkhiqizo wokuqhekeka kwawo - ushukela, uyingozi kakhulu kwabanesifo sikashukela. Ngalesi sifo, amanyikwe awakhiqizi i-insulin eyanele. I-hyperglycemia engapheli iba.
Ikhalori fructose - 400 kcal ngamagremu ayi-100. I-GI yayo iphansi, amayunithi angama-20 kuphela. Ngaphezu kwakho konke, kuyaziswa ngokwandisa ukugcwala kwe-glucose egazini kancane kancane. Ngenxa yaleli khwalithi, kuvunyelwe ekudleni kwabanesifo sikashukela nabantu abalwela ukondliwa okufanele.
Ungawugcina kanjani ushukela uvamile ku-2019
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi kungenzeka ukuthi kusetshenziswe kaningi nangobungako obufanayo nomkhiqizo ojwayelekile ocolisisiwe. Ngohlobo lwesifo oluzimele lwe-insulin, inani eliphakeme lansuku zonke le-fructose lingama-30 amagremu. Ngohlobo oluncike kwe-insulin, okujwayelekile kukhulu kancane - amagremu angama-50. Lokhu cishe amathisipuni ama-5 noma izipuni ezimbili.
Naphezu kwezinzuzo zayo ezicacile, ukusetshenziswa okungalawulwa kwe-fructose kungaba yingozi empilweni yesifo sikashukela.
Amaphuzu amakhulu kufanele anake:
I-Fructose igxilwa ngqo esibindini, lapho okwedlula khona kuguqulwa kube ngamadiphozithi angamafutha.
Naphezu kwenkomba ephansi ye-glycemic, amakhalori acishe afane noshukela ojwayelekile: 380 kcal ngamagremu ayi-100. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo kufanele kube ngokulinganayo.
Ukusetshenziswa nsuku zonke kwe-fructose kubangela ukwephulwa kokukhiqizwa kwe-leptin ye-hormone, ebhekele umuzwa wokugcwala. Umuntu onesifo sikashukela uzizwa elamba njalo futhi edla ngokweqile. Ukudla ngokweqile njalo kuholela ekuthuthukiseni ukukhuluphala.
Ngokuphikisana nesizinda sokukhuluphala ngokweqile, njengomthetho, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, umfutho wegazi ophakeme nezinye izifo zohlelo lokuthinta kwenhliziyo kukhula.
Izici ezinenzuzo ze-fructose zinzima ukuzidonsa ngokweqile. Kungumkhiqizo obaluleke kakhulu ekudleni kwabashukela, ikakhulukazi labo abangakwazi ukwenza ngaphandle kwamaswidi. Kodwa-ke, ukuphepha kwayo empilweni kungamanga ikakhulukazi. Ngobuningi obukhulu nokusetshenziswa okungalawulwa, kungadala ingozi enkulu empilweni.
U-Alexander Myasnikov ngoDisemba 2018 wanikeza incazelo mayelana nokwelashwa kwesifo sikashukela. Funda ugcwele
Ama-carbohydrate ayizinto ezinamamolekyuli enziwe nge-carbon, oxygen ne-hydrogen. Njengomphumela we-metabolism, baphenduka ushukela - umthombo wamandla obalulekile womzimba.
I-Glycemia- Izinga likashukela wegazi (ushukela)
IGlucose “uphethiloli” obaluleke kakhulu emzimbeni. Idlulela egazini futhi ifakwa ngesimo se-glucogen emisipha kanye nesibindi.
Ushukela wegazi (ofana noshukela) amaphesenti kashukela egazini lonke. Esiswini esingenalutho, yi-1 g nge-1 litre yegazi. Lapho ama-carbohydrate (isinkwa, uju, isitashi, okusanhlamvu, amaswidi, njll.) Kudliwa esiswini esingenalutho, izinga likashukela egazini lishintsha kanjena: okokuqala, izinga likashukela liyenyuka - okubizwa ngokuthi yi-hyperglycemia (ngokuya ngobukhulu noma kancane - kuya ngohlobo lwe-carbohydrate) ), bese kuthi ngemuva kokuthi ama-pancreas esekhiphe i-insulin, izinga likashukela wegazi liyehla (i-hypoglycemia) bese ibuyela ezingeni layo langaphambilini, njengoba kukhonjisiwe kwigrafu ekhasini 36.
Kuyo yonke le minyaka, ama-carbohydrate ahlukaniswe izigaba ezimbili, kuya ngesikhathi amunyiswa ngumzimba: ushukela osheshayo noshukela omncane.
Umqondo wokuthi "ushukela osheshayo" ubandakanya ushukela olula noshukela ophindwe kabili, okufana noshukela kanye ne-sucrose, okuqukethe ushukela ocwengekile (isitshulu sikashukela nomhlanga), uju nezithelo.
Igama elithi "ushukela osheshayo" lichazwa ngombono ovelele wokuthi, ngenxa yokulula kwe-molecule ye-carbohydrate, umzimba usheshe uyifune, ngokushesha nje ngemuva kokudla.
Futhi isigaba se "ushukela omncane" sifaka wonke ama-carbohydrate, i-molecule eyinkimbinkimbi okukholelwa ukuthi iguqulwe yaba ushukela olulula (ushukela) ngesikhathi sokugaya. Isibonelo kwakuyimikhiqizo ethambile, lapho ukukhishwa kwe-glucose, njengoba bekukholelwa njalo, bekuhamba kancane futhi kancane kancane.
Kuze kube manje, lokhu kuhlukaniswa sekuziphumele ngokuphelele futhi kuthathwa njengokungalungile.
Ukuhlolwa kwakamuva kufakazela ukuthi ubunzima bokwakheka kwamamolekyuli e-carbohydrate alithinti isilinganiso sokuguqulwa kwabo kube ushukela, noma isilinganiso sokuqunjelwa ngumzimba.
Kwasungulwa ukuthi inani eliphakeme kushukela wegazi (hyperglycemia) livela isigamu sehora ngemuva kokuthatha noma yiluphi uhlobo lwe-carbohydrate esiswini esingenalutho. Ngakho-ke, kungcono ukungakhulumi ngesilinganiso sokufakwa kwe-carbohydrate, kodwa ngomthelela wabo enanini leshukela egazini, njengoba kukhonjisiwe kwigrafu engenhla:
Ochwepheshe bezokudla bafikile esiphethweni sokuthi ama-carbohydrate kufanele ahlukaniswe ngokwamandla abo okuthiwa yi-hyperglycemic, anqunywa yinkomba ye-glycemic.
Amandla ama-carbohydrate okubangela ukwanda koshukela wegazi (hyperglycemia) kunqunywa yinkomba ye-glycemic. Leli gama laqanjwa okokuqala ngo-1976.
Inkomba ye-glycemic izoba ngaphezulu, iphakamise i-hyperglycemia ebangelwa ukuwohloka kwamakhabhohayidrethi. Ihambelana nendawo kanxantathu, eyakheka kugrafu ijika le-hyperglycemia ngenxa yokudla ushukela. Uma inkomba ye-glycemic ye-glucose ithathwa njenge-100, khona-ke inkomba yamanye ama-carbohydrate inganqunywa ngefomula elandelayo:
Indawo yeCarbon Triangle
Indawo yeGlucose Triangle
Okusho ukuthi, i-hyperglycemia enamandla kangakanani yokuhlaziya, iyanda inkomba ye-glycemic.
Kufanele kwaziwe ukuthi ukucubungulwa kwamakhemikhali kwemikhiqizo kungaholela ekwandeni kwenkomba ye-glycemic. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, inkomba ye-glycemic yama-corn flakes ingama-85, kanti ummbila okwenziwe kuwo unama-70. Amazambane asheshayo acubuziwe anenkomba ye-glycemic ka-90, namazambane abilisiwe - 70.
Siyazi futhi ukuthi ikhwalithi nenani le-fibergegesgeble ku-carbohydrate kuncike enkombeni ye-glycemic. Ngakho-ke, ama-buns amhlophe athambile anenkomba ye-glycemic engu-95, izinkwa ezimhlophe - 70, isinkwa se-wholemeal - 50, isinkwa se-wholemeal - 35, ilayisi elicwengekile 70, elingafakwanga 50.
I-CarboHYDRATES, I-GLYCEMIC INDEX
Futhi isigaba se "ushukela omncane" sifaka wonke ama-carbohydrate, i-molecule eyinkimbinkimbi okukholelwa ukuthi iguqulwe yaba ushukela olulula (ushukela) ngesikhathi sokugaya.Isibonelo kwakuyimikhiqizo ethambile, lapho ukukhishwa kwe-glucose, njengoba bekukholelwa njalo, bekuhamba kancane futhi kancane kancane.
Imibhalo: I-Carbohydrate ne-Glycemic Index Yokwehlisa Isisindo
Kubukeka sengathi ukondliwa kwamashumi amathathu eminyaka edlule kukhombisile ngokwenele ukuthi isakhi esiyinhloko esinomthelela ekuzuzeni isisindo ngamafutha.
Umzimba ugcina ngokuzithandela, futhi ngamafutha amaningi ekudleni, isisindo somzimba siba ngenakugwenywa.
Kodwa-ke, ngisho kwamanje usengathola izindatshana eziningi, noma zibhalwe ngodokotela, abathi ngandlela thile bonke ububi kithi abusekho emafutheni, kepha kuma-carbohydrate, ukuthi ama-carbohydrate mabi kunobuthi ngokuncipha. Njengama-carbohydrate lapho ukudla ngokweqile kuguqulwa ngokushesha kube ngamafutha, kufakwa okhalweni, bese uyahamba uyowakhipha lapho.
Njengo, ekuphenduleni ukusetshenziswa kwe-carbohydrate, umzimba ukhiqiza i-insulin, futhi le-hormone, njengoba wazi, ithuthukisa ukwakheka kwamafutha, ivimbela ukuwohloka kwayo futhi ikhulise isifiso sokudla, okubonga kuyo okukhethekile.
Ngakho-ke, uma ufuna ukunciphisa umzimba, khipha isinkwa, okusanhlamvu okuqinile, amaswidi ekudleni. Ama-carbohydrate anqabela ngokuqinile ukudla okufana ne-Atkins, ukubheka ukuthi, unganciphisa ngempela isisindo, okungenani kube nezimo.
Kodwa-ke, lapho ukhuluma ngama-carbohydrate, kufanele kukhunjulwe ukuthi leli yisigaba esinamakhompiyutha amaningi kakhulu (ushukela, isitashi, umugqa wokudla), othinta i-metabolism ngezindlela eziningi.
Ama-carbohydrate ahlukaniswe alula futhi ayinkimbinkimbi. Elula, ushukela. Kulawa, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi akhiwe kusuka ezitini. Ama-Sugars ahlukaniswe ama-monosaccharides nama-disaccharides. I-Monosaccharides - i-fructose, ushukela, galactose. Ama-Disaccharides akhiwa ngama-molecule amabili kashukela. Ngakho-ke, ushukela ojwayelekile ovela esitsheni sikashukela, i-sucrose, uqukethe ama-molecule we-fructose kanye noshukela ahlanganiswe ndawonye; ushukela we-lactose ushukela wakhiwe kusuka kuma-molecule we-galactose ne-glucose.
I-polysaccharide eyinkimbinkimbi ye-carbohydrate esiyisebenzisela ukondla isisitashi. Yakhiwe kusuka kuma-molecule eglue axhunyiwe. Emapheshaneni asesiswini, isitashi siyabhidlika ngokwakhiwa kwe-glucose, edonswa bese ngokwengxenye iya kuzidingo zamandla, ezigcinwe ngasesibindi nasemisipha ngesimo se-glycogen. IGlycogen nesitashi ziyefana. Ama-molecule we-glycogen nje amancane. Ngakho-ke uma ku-starch kuvame ukusala kuze kufike ku-250 ushukela we-glucose, khona-ke ku-glycogen kukhona abangaba ngu-150 kubo.
Ushukela, nesitashi, kanye ne-glycogen kunenani lamandla cishe ama-kilocalories angama-4.1 i-g ngayinye. Lokho kungukuthi kukhishwa amandla angakanani lapho i-gramu eyi-1 yalezi zinto iphulwe. Ingabe kuningi noma kukuncane? Khumbula embhalweni we-physics - 1 ikhalori, la ngamandla adingekayo ukushisa u-millilitha wamanzi nge-1 degree Celsius. Ngokufanelekile, amandla akhishwe ngokushisa i-gramu eyi-1 yama-carbohydrate anele ukufudumeza i-LITR eyodwa yamanzi cishe ama-4 degrees.
Kukholelwa ukuthi umuzwa wokuxhamazela noma wendlala kumuntu ikakhulukazi unqunywa izinga likashukela egazini. Ushukela owanele - kunomuzwa wokugcwala, ushukela wegazi uyancishiswa - sifuna ukudla.
Imvamisa umuntu udla cishe ama-300-400 amagremu ama-carbohydrate ngosuku, okucishe kube yingxenye, noma ngisho namaphesenti ayisithupha ukusetshenziswa kwansuku zonke kwamandla. Singasho ukuthi ama-carbohydrate angumsoco wethu oyinhloko, futhi, uma kukhulunywa kakhulu, ukondliwa kwabantu ikakhulu yi-carbohydrate.
I-fiber yokudla, ingxenye enkulu, nayo ama-polysaccharides akhiwa ngamaketanga e-glucose ne-fructose. Kepha emgudwini we-gastrointestinal wezilwane ezincelisayo, akukho ma-enzyme akhiqizwa ukubaphula phansi. Singasho kufanele ukuthi, ezindizeni zamandla, lezi zinto zingena ngaphakathi. Ukuze ugweme ukudideka ezincwadini zokulahlekelwa isisindo, imicu yokudla izama ukungabizi ama-carbohydrate ngokungadingekile. Masingavumi futhi ngeke.
Ngakho-ke ama-carbohydrate afaka isandla ekuzuzeni isisindo noma cha? Ngokusho kwemibono yesimanje, umphumela wama-carbohydrate ezinqubweni zokuqongelela, ukugcinwa kanye nokusetshenziswa kwemali yamanqatha kumnqunywe ngokuphelele ngohlobo lwawo. Kukhona ama-carbohydrate asivikela ekuzuzeni isisindo, futhi kukhona ngqo aba nomthelela kulokhu kwanda.
Ushukela - zona ngokwazo aziguquki zibe ngamafutha, kepha zinomthelela ekwedlweni
Futhi kwenzekani nge-fructose, ngoba ukuthathwa kwayo akuxhomekeki ku-insulin? Yize ingekho impendulo eqondile yalo mbuzo, kepha kunesizathu esihle kakhulu sokwesabela ukuthi i-fructose eyeqile ekudleni nayo inomthelela ekuzuzeni isisindo. Iqiniso ngukuthi ku-fructose nasezingxenyeni ze-molecule enamafutha, izindlela zokushintshana ziyahlangana. Ngakho-ke, ngenkathi umzimba wephula i-fructose, udla amanoni amancane. Ososayensi abaningi baze bathi ingxenye ye-fructose ingaguqulwa ngokuqondile ibe ngamafutha, kepha ubufakazi obuqondile balokhu abutholakalanga.
Ngakho konke lokhu okungenhla, kungaba ngcono ukuthi singasebenzisi kabi amaswidi, ikakhulukazi iziphuzo ezimnandi. Akukalulekanga ukuxhaphaza nezithelo ezinhle. Futhi vele akukho ukusetshenziswa okunengqondo kwe-confectionery, ujamu nezinye izinto ku-fructose.
Izincomo ezijwayelekile zokudla ushukela omncane kuzanywa ukungazidli amaswidi esiswini esingenalutho, ungazisebenzisi njengama-snacks, ukukhiqiza iziphuzo ezimnandi ngamanzi amaminerali. Kuyalulekwa nokuthi udle amaswidi ngemuva kokudla. Ukuba khona kwepheshana lesisu sezinye izinhlobo zokudla kubambezela ukumuncwa koshukela.
Sikhohliwe futhi ukusho i-lactose - ushukela wobisi. Ngenxa yakhe, ososayensi abaningi bahlanganiswa ngokuthula. Kukholelwa ukuthi ubisi, ikakhulukazi olungenamafutha, lufiseleka kakhulu ngokulahlekelwa isisindo - umkhiqizo owanelisayo futhi hhayi ophakeme kakhulu. Kepha lapho, i-lactose ikhona kanye namaprotheni obisi, futhi amaprotheni, ikakhulukazi lawo asezingeni eliphakeme, abonwa ngathi njengokudla okwanelisa kakhulu. Indlela i-lactose eziphatha ngayo uma inikezwa abantu ngokwahlukana nobisi, akekho oye wahlola kuze kube manje.
Isitashi. Akuguquki ekubeni ngamafutha futhi kusivikele ekuzuzeni isisindo
Kepha futhi asikwazi ukuqongelela ama-carbohydrate ngamanani amakhulu ngesimo se-glycogen. Ngemuva kwakho konke, umthamo we-glycogen depot emzimbeni wethu mncane kakhulu - amagremu angama-70-100 emisipha futhi cishe okufanayo esibindini. Futhi njengoba singeke siguqule ama-carbohydrate abe ngamafutha noma i-glycogen, khona-ke ngeke futhi siwadle ngamanani amakhulu: akukho ndawo! Yingakho ama-carbohydrate abonwa ngathi njengokudla okwanelisa kakhulu. Ungayikholwa, qhathanisa - isitsha selayisi eliphekwe, amagremu angama-200 nesipuni samafutha zemifino. Amakhalori kulezo zingxenye zombili ayalingana - 150, kanti ukuqina kwerayisi kuphakeme ngokungenakuqhathaniswa.
Kepha njengoba ama-carbohydrate avela ekudleni okunesitashi kungewona owethu owokuqala wamafutha, kuvela ukuthi lapho sizidla kakhulu, kulapho sigcwele khona futhi mancane amathuba okuba nesisindo. Kuyavela ukuthi i-pasta, okusanhlamvu, isinkwa namazambane kusivikela ekuzuzeni isisindo!
Leli qiniso ukuthi ngokuncipha kwesisindo noma kunoma yikuphi ukunakekelwa kwesisindo awukwazi ukudla okuncane, futhi OKWENGEZIWE kwesinkwa noma i-pasta efanayo akubonakali kungalindeleki kangangokuba abaningi benqaba ukukholelwa kukho. Ikakhulu labo “ababoshwe” ngomqondo wokulinganisela kwamandla. Banjani, uma ngisebenzisa ama-kilojoule angama-2 000 ngosuku, futhi ngidle okungaphezulu, bathi u-2500, ngiphela amandla, kungakhathalekile ukuthi ngidlani la makhalori? Ngizozidla, ngokwesibonelo, ngesimo sesinkwa, futhi lokho, futhi, ngeke kukhuluphele?!
Ngempela, uma zonke izimo zihlangabezana futhi empeleni zisebenzisa amandla amaningi kunokudla, ukuzuza isisindo akunakugwenywa. Lokhu kudingwa ngumthetho wesibili we-thermodynamics, othi amandla angaguquka asuka kwesinye isimo aye kwesinye, kodwa anganyamalala. Yebo, lokho ukulandela nje lezi zimo akunakwenzeka ukuthi uphumelele. Imayelana nokunetha okuphezulu kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi namaprotheni. Uma ukudla kwakhiwa ngokuyinhloko kubo, umuntu uzobe esegculisiwe kokuqukethwe kakhalori okuphansi.
Kepha noma kunjalo, babuza ukuthi ngabe kukhona yini umkhawulo, kungenzeka yini ukuthi kudle ama-carbohydrate amaningi ngesikhathi lapho umzimba, ongakwazi ngandlela-thile ukuwushisa wonke noma ukuqongelela ngohlobo lwe-glycogen, uqala ukukhiqiza amafutha avela kuma-carbohydrate? Yebo, kunesibalo esinjalo. Kukholelwa ukuthi uma udla cishe ama-300 g ama-carbohydrate ngasikhathi (uma kukhulunywa, kungakapheli nehora), kuzodluliswa umkhawulo, bese umzimba uqala ukuhlanganisa amafutha ngokweqile. Ngezansi kwepuleti nginikeze inani lemikhiqizo ethile eyaziwa kithi equkethe la ama-300 g we-carbohydrate. Zigwebe ukuthi ngabe kuningi noma kukuncane, singadla kakhulu noma cha, futhi sizozizwa sihle uma sikwazi?
Isisindo sokudla okuhlukahlukene okuqukethe i-300 g yama-carbohydrate
I-Akhmanov, Isifo Sikashukela se-M.S. Konke odinga ukukwazi (+ DVD-ROM) / M.S. Akhmanov. - M.: Vector, 2010 .-- 352 k.
Nikberg I.I. Isifo sikashukela mellitus, Ezempilo - 1996 - 208 c.
I-Ivashkin, V.T. Ukwehlukahluka kwemitholampilo kwe-metabolic syndrome / V.T. I-Ivashkin, O.M. IDrapkina, O.N. Korneev. - EMoscow: Gostekhizdat, 2018 .-- 220 k.